Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Boeing ayaa soo saartay xamuul cusub oo ah 737-800BCF
Aviation • Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga!
Boeing ayaa ku dhawaaqday qorshayaal ay ku furayso saddex khad oo cusub oo xamuul ah waxayna la saxeexatay amar adag Icelease 11 737-800 Boeing Converted Freighters. (Sawirka sawirka: Boeing)
Maaddaama baahida caalamiga ah ee xamuulka xamuulka ay sii kordheyso, Boeing [NYSE: BA] ayaa maanta ku dhawaaqday qorshayaal lagu kordhinayo seddex khad oo beddelaad ah oo suuqa hogaaminaya 737-800BCF ee Waqooyiga Ameerika iyo Yurub. Shirkaddu waxay sidoo kale la saxeexatay amar adag Icelease kow iyo toban ka mid ah xamuulka xamuulka sida macmiilka bilaabay mid ka mid ah khadadka beddelka cusub.
2022, shirkaddu waxay hal khad ka furi doontaa Boeing's London Gatwick Maintenance, Repair & Overhaul (MRO), oo ah hangarkeeda casriga ah ee Boqortooyada Midowday; iyo laba xariiq oo beddelaad ah 2023 ee KF Aerospace MRO ee Kelowna, British Columbia, Canada.
"Dhisidda shabakad kala duwan oo caalami ah oo tas-hiilaad beddelaad ah ayaa muhiim u ah taageeridda kobaca macaamiisheena iyo buuxinta baahida gobolka," ayuu yiri Jens Steinhagen, maamulaha Boeing Converted Freighters. "KF Aerospace iyo saaxiibadayada Boeing ee London Gatwick waxay leeyihiin kaabayaasha, awoodaha, iyo khibradda looga baahan yahay inay u gudbiyaan macaamiishayada Boeing-ka beddelka xamuulka ee hogaaminaya suuqa."
"Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ballaarineyno xiriirka aan la leenahay Boeing," ayuu yiri Gregg Evjen, madaxa hawlgelinta ee KF Aerospace. "Waxaan la shaqaynaynay khadka wax soo saarka Boeing in ka badan 30 sano. Waayo-aragnimadayada beddelka xamuulka, xoog-shaqaheena xirfadda sare leh iyo dhammaan shuruudaha farsamo ee hadda jira, waxaan diyaar u nahay inaan shaqada helno oo aan gacan ka geysanno u adeegidda macaamiisha Boeing."
Icelease, oo dhawaan balaadhisay wada shaqaynta ay la leedahay Corrum Capital iyada oo loo marayo shirkad wadaag ah oo lagu magacaabo Carolus Cargo Leasing, dalabka kow iyo tobanka 737-800BCF ayaa noqon doona dalabkoodii ugu horreeyay ee xamuulka qaada ee Boeing. Kireeyaha ayaa noqon doona macmiilka bilaabaya beddelka Boeing's London Gatwick MRO.
"Waxaan ku kalsoonahay tayada iyo rikoorka la xaqiijiyay ee Boeing 737-800 ee xamuulka qaada, waxaanan ku faraxsanahay inaan noqono macaamiisha bilaabay xaruntooda cusub ee London MRO," ayuu yiri Magnus Stephensen, oo ah shuraako sare oo ka tirsan Icelease. "Waxaan rajeyneynaa inaan keenno xamuulka maraakiibteena si aan ugu adeegno saldhigga macaamiisha caalamiga ah ee sii kordhaya ee ka shaqeeya waddooyinka gudaha iyo kuwa gaaban."
Horraantii sanadkan, Boeing waxay ku dhawaaqday inay abuuri doonto 737-800BCF dheeraad ah awood beddelasho dhowr goobood, oo ay ku jiraan khadka beddelka seddexaad ee shirkadda Guangzhou Aircraft Maintenance Engineering Company Limited (GAMECO), iyo laba khad beddelaad sanadka 2022 oo leh alaab-qeybiye cusub, Cooperativa Autogestionaria de Servicios Aeroindustriales (COOPESA) ee Costa Rica. Marka khadadka cusub ay firfircoonaadaan, Boeing waxay yeelan doontaa goobo beddelaad ee Waqooyiga Ameerika, Aasiya iyo Yurub.
Boeing waxay saadaalisay in 1,720 beddelaad xamuul ah loo baahan doono 20ka sano ee soo socda si loo daboolo baahida. Kuwaas, 1,200 waxay noqon doonaan beddelka-jirka caadiga ah, iyadoo ku dhawaad ​​20% baahidaas ay ka imanayso sidayaal Yurub, iyo 30% ay ka imanayaan Waqooyiga Ameerika iyo Laatiin Ameerika.
737-800BCF waa hogaamiyaha suuqa xamuulka ee caadiga ah oo leh in ka badan 200 oo dalab iyo ballanqaadyo 19 macaamiil ah. 737-800BCF waxay bixisaa isku halaynta sare, isticmaalka shidaalka oo hooseeya, kharashyada hawlgelinta oo hooseeya safar kasta iyo taageero farsamo oo heer caalami ah marka la barbar dhigo xamuulka kale ee jirka. Baro wax badan oo ku saabsan 737-800BCF iyo qoyska Boeing oo dhammaystiran halkan.